UJIM STEINMAN, UMBHALI WENGOMA EMVA KWENYAMA YESONKA EBAT ESIHOGWENI, USWELEKE ENEMINYAKA ENGAMA-73 - IINDABA
UJim Steinman, Umbhali weNgoma emva kweNyama yeSonka eBat esihogweni, usweleke eneminyaka engama-73
UJim Steinman, umqambi weengoma, umvelisi weengoma, umvelisi, kunye nomdlali wezinto ezininzi owabhala zonke iingoma kwinyama yesonka Ukuphuma esihogweni kwaye Ukuphuma esihogweni II: Buyela esihogweni uswelekile, TMZ kwaye Amatye agiqekayo ingxelo. Unobangela wokufa awukatyhilwa. USteinman wayeneminyaka engama-73 ubudala.
UJim Steinman wazalelwa eNew York ngo-1947. Wakhulela eLong Island, waphumelela kwisikolo samabanga aphakamileyo iGeorge W. Hewlett ngo-1965 ngaphambi kokuba aye kwiKholeji i-Amherst waphumelela ngo-'69. Njengomphathi omkhulu eAmherst, uSteinman wadala kwaye wafaka iinkwenkwezi kwimveliso yeqonga lomculo Injini yephupha , ekuthiwa ubize i-rock-epic yeeyure ezintathu kunye neetoni zobunqunu.
Phakathi kwababukeli be Injini yephupha yayinguJoseph Papp, umseki wePeyetha kaRhulumente, owayesebenza noSteinman ukulungelelanisa umculo kumdlalo obizwa ngokuba Ungaze , eyathi yaqala ukuboniswa okokuqala ngo-1977. Ngokunxibelelana ne-Public Theatre, uSteinman weza kusebenza nenyama yesonka, eyavela ngo-1973 kwimveliso kaSteinman Ngaphezulu Kokufaneleyo .
Ngo-1975, uSteinman walishiya ilizwe lemidlalo yeqonga ukuba agxile ekwenzeni umculo ngeSonka seNyama. Kwiminyaka emibini kamva, ukusebenzisana kwabo kwafezekiswa ngendlela ekhangayo kunye ne-Meat Loaf's debut Ukuphuma esihogweni , eya kuba yenye yee-albhamu ezithengisa kakhulu ngalo lonke ixesha. USteinman kunye nenyama yesonka bachitha iminyaka bengeyonto ngaphambi kokuphinda bahlangane ngo-1993 Ukuphuma esihogweni II: Buyela esihogweni , enengoma ebalaseleyo yeMeaf Loaf ndenza Nantoni na ngothando (Kodwa andizukuyenza loo nto). U-Lou Reed unjalo uxelwe ukubiza ialbham ikamva apho kufanele ukuba kukhokelwe khona.
Ngaphandle komsebenzi wakhe neSonka seNyama, uJim Steinman wabhala izingoma zikaBonnie Tyler (Iyonke i-Eclipse yentliziyo), uCéline Dion (Yinto Yonke Ebuyela Kum Ngoku), iiSisters of Mercy (Ngaphezulu), nabanye. Ukhuphe icwecwe elilelakhe yedwa Kubi ngokulungileyo ngo-1981.
USteinman wonyulwa kwiimbasa ezine zeGrammy, ekwabelwana ngembasa yeGrammy ye-1997 yeAlbhamu yoNyaka ngomsebenzi wakhe kuCéline Dion Ukuwa Kuwe . Waye wanyuselwa kwiHolo loDumo lababhali beNgoma ngo-2012 kunye neHolo yoMculo yeLong Island ngo-2016.
Enye yeempumelelo zokugqibela zobomi bukaJim Steinman yayikukujika Ukuphuma esihogweni kumdlalo weqonga. Ukuphuma esihogweni: uMculo Inkulumbuso eManchester, eNgilani ngoFebruwari 2017 kwaye babaleka kwiindawo ezininzi kule minyaka ilandelayo. Oku kwakuthetha ukuba ngumculo, inyama yesonka uxelele INew York Times . Ndayenza umboniso werwala. UJimmy wayiguqula wenza umculo. Yiloo nto awayefuna ukuba yiyo.
Kwingxelo ku Amatye agiqekayo , UBonnie Tyler ukhumbule umlingani wakhe osele edlulile: Ndixhelekile xa ndisiva ngokusweleka komhlobo wam wexesha elide kunye nomcebisi womculo uJim Steinman, uxelele RS . UJim wabhala kwaye wavelisa ezinye zeengoma zerock ezona zibalaseleyo ngalo lonke ixesha kwaye ndandinelungelo elikhulu lokunikwa ezinye zazo. Ndenze ii-albhamu ezimbini kunye noJim, ngaphandle kokuba inkampani yam yokurekhoda ekuqaleni yayicinga ukuba ngekhe ifune ukusebenzisana nam. Ngombulelo babengachananga, kwaye singatsho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba uJim wayeyingqondi yokwenene.
I-loretta lynn imihla yokukhenketha ngo-2017
ulingise imingxunya emnyama kunye nezityhilelo
ukubetha amathanga lusizi olungapheliyo
Ii-albhamu ezigqwesileyo zeefolokhwe ezingama-90
abacula umhobe wesizwe ngokuhlwanje